Mithila Laghubitta Bikash Bank » Protection Scheme
यस योजनामा नियमित रुपमा शुल्क बुझाएका सदस्यको मृत्यु भएमा रु.४ हजार देखि ६ हजार सम्म, निजको एकाघरको पतिको मृत्यु भएको अवस्थामा रु. २ हजार देखि ३ हजार सम्म, पहिलो दुई सन्तान जन्मदा सम्म प्रत्येक सुत्केरी अवस्थामा रु. १ हजार तथा निजको स्वःवासी घर आगलागि तथा नदी वा खोलाको बाढी पहिरोले बस्न नहुने गरी क्षतिग्रस भएमा बढीमा रु. २ हजार सम्म यस योजनाबाट सुविधा(क्षतिपुर्ति) उपलब्ध गराईनेछ ।
सदस्य सुरक्षण कोष :
बैंकको समुहमा आवद्ध भई लघु कर्जा उपभोग गरेका ग्राहक सदस्यहरुलाई आर्थिक सुरक्षा तथा राहत प्रदान गर्ने उद्घेश्यले ऋणी सदस्य सुरक्षण कोषको ब्यवस्था गरिएको छ । यस कोषमा संलग्न हुन लघु कर्जा उपभोग गर्ने सदस्यले कर्जाको न्युनतम ०.५ प्रतिशतले हुने शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । यो सुरक्षण ऋणी सदस्यले आफ्नो ऋण लिएको मितिवाट एक वर्ष सम्म अवधीका लागि गरेको सुरक्षण हुनेछ । शुल्क बुझाएका ऋणी सदस्यले लिएको ऋणको सुरक्षण कोष अवधि समाप्त हुनु अगावै ऋणीको मृत्यु भएमा वाँकी साँवा रकम बराबरको क्षतिपूर्ति राहत रकम निजले ईच्छाईएको व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ ।